बेहुला बिनाको बिहे पनि गरीछोडे अग्नी सापकोटाले ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
बेहुला बिनाको बिहे पनि गरीछोडे अग्नी सापकोटाले !
सभामुख अग्नी सापकोटाको व्यवहार प्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्र्दै आइरहेको छ । सापकोटाले अझै निकास भेट्टाउँन सकेका छैनन् ।
एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण संसदको अवरोध हटाउँने उपाय स्वरुप सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए तर एमाल ेनै बैठक बहिस्कार गरे पछि उनी खिन्न भएका छन् ।
जसको विषयमा छलफल गर्ने र समस्या समाधानको पहल गर्ने भनेर सभामुखले बैठक आयोजना गरेका थिए उनै नजाँदा पनी बैठक भने सुुरु गरेका छन् । एमालेनै अनुपस्थीत बैठकलाई कतिपयले बेहुला बिनको बिहे सँग तुलना गरेका छन् । बेहुला बिनाकै बिहे पनी उनले गरिछाडेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण अवरुद्ध भएको संसद सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक शुरू भएको छ।
बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा शुरू भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) भने अनुपस्थित छ । १४ जनामाथि गरिएको कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको एमालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई आज बिहान टेलिफोनमार्फत आफूहरूले अवैध भनेको दल नेकपा एसको सहभागितामा हुने बैठकमा भाग नलिने जानकारी दिएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एस) का माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनलगायत उपस्थित छन्। सर्वदलीय छलफलमा लागि सभामुख सचिवालयले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो ।
सभामुखले आइतबार पनि एमालेसँग संवादको प्रयास गरेका थिए । एमालेले विरोधमा निरन्तरता दिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा एमाले सांसदहरूले सभामुखलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यो सच्याएपछि मात्रै सदन चल्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।